मोबाइल र कम्प्युटरको स्क्रिनमा बस्नेलाई ‘ड्राइ आइ’ को समस्या, कसरी बच्ने ? - Nippon Samachar.com No 1 News Portal from Nepal in Japan
Sunday January 23, 2022 | |
मोबाइल र कम्प्युटरको स्क्रिनमा बस्नेलाई ‘ड्राइ आइ’ को समस्या, कसरी बच्ने ?
2021 Aug 06 Tweet
एजेन्सी ।आँखामा पीडा हुने, घोच्ने, पोल्ने, रातो हुने र थकान महसुस हुनुलाई ‘ड्राइ आइ’ को समस्या भन्ने गरिन्छ । अप्टोमेट्रिस्ट डा. स्याम बर्नका अनुसार आँखामा यस्तो समस्या आउनुको पछाडि दुई वटा कारण रहेका छन् । पहिलो कारण आँखा सुन्निनु र अर्को डिजिटल आई स्ट्रेन हो ।
अमेरिकी स्वास्थ्य एजेन्सी (CDC ) ले कम्प्युटर, मोबाइल र ल्यापटपमा बस्दा ६६ प्रतिशत कम झिम्क्याइन्छ । एक रिपोर्टका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा लकडाउनको परिस्थितिका कारण धेरै जस्तो बालबालिका दिनभर कम्तीमा ४ घण्टा स्क्रिनमा बिताउने गरेका छन् ।
विशेषज्ञका अनुसार यस्तो समयमा २०–२०–२० को सूत्र अपनाउनुपर्छ । स्क्रिनमा हेरेको हरेक २० मिनेटमा २० सेकेन्डसम्म २० फिट टाढा हेर्ने गर्नुपर्छ ।
स्क्रिनमा बस्दा के गर्ने ?
–कम्प्युटर, ल्यापटप वा मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्दा आँखाभन्दा तल २० इन्च तलको दूरीमा आफ्नो हातको बराबरको दुरीमा राख्नुस् ।
–स्क्रीनमा हेर्दा चस्मा लगाउने ।
–स्क्रीनमा हेर्ने समयमा आँखा झिम्क्याउन भुल्नुहुँदैन । यसले सुख्खा हुने र धमिलो देख्ने समस्याबाट बचाउँछ ।
–स्क्रीन वा आसपास पर्याप्त मात्रामा उज्यालो हुन आवश्यक हुन्छ । ग्याजेटको लाइट पनि धेरै उज्यालो वा कम उज्यालो बनाउन हुँदैन ।
–आँखा थाकेको समयमा रगड्ने गर्नुहुँदैन । यसले आँखामा संक्रमण गराउँछ ।
–स्क्रीनको फ्रन्ट साइज ठूलो बनाउनुपर्छ । जसका लागि स्पष्ट देखिने फ्रन्टको प्रयोग उचित मानिन्छ ।
–पर्याप्त मात्रा निन्द्रा र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गर्दा आँखामा सुख्खापन आउन पाउँदैन ।
के–के खाने ?
आँखालाई सधैँ स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नका लागि हरिया सागपात प्रशस्त मात्रामा खाने गर्नुपर्छ । यसका साथै, ओखर, काजु, बदाम जस्ता ओमेगा–३ पाइने खानेकुरा, भिटामिन इ पाइने खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ ।
यस्तै, चिया सिड्स पनि खाने गर्दा आँखालाई फाइदा पुग्छ । साथै, फाइबर, प्रोटिन र जिंकयुक्त खानेकुराको सेवनले आँखालाई धेरै फाइदा पुग्छ । यति मात्र होइन स्वस्थ आँखाको लागि समय समयमा डाक्टरको सल्लाह लिन पनि आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य - Aug 06
समाचार - Aug 06
विश्वका १३२ देशमा फैलियो डेल्टा भेरियन्टः डब्लुएचओ
अन्तरराष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसन करिब ४५ मिनेट नासा...
सोनको लागि स्वर्ण ओलम्पिक डेब्यू
ट्विटरले मिथ्या सूचनाको समस्यासँग जुध्न समाचार साइ...
ट्विटर स्पेसेजमा अब को-होस्टलाई पनि आमन्त्रण गर्न...